पारसको गेटअपमा भरतमणिले मच्चाए बबाल, पुगे सिधै फाइनलमा – Butwal 24 News
August 29, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on पारसको गेटअपमा भरतमणिले मच्चाए बबाल, पुगे सिधै फाइनलमा
अनि सुरु हुन्छ मञ्चमा रोमाञ्चक माहोल । लामो कपाल, त्यसमाथि ढाका टोपी, गलामा रुद्राक्षको माला, लामो कमिज लगाएका व्यक्ति अर्थात झलक्क हेर्दा पारस शाहजस्तै देखिने गेटअप । अनि सुरु हुन्छ–उनको उही हाउभाउका साथ प्रस्तुति । शनिबार प्रशारण भएको कमेडी च्याम्पियनको अन्तिम ४ को प्रतिस्पर्धामा पारसको गेटअपमा मञ्चको एक कुनामा बसिरहेका उनलाई कसैले भन्छ–ल जाउँ सरकार !
उनको जवाफ हुन्छ–म किन जाने ? किन जाने ? पारसको क्यारिकेचर गर्दै भरतमणिले यति भनेपछि दर्शकदिर्घाबाट सुरु हुन्छ, हुटिङ ।